Ndị na-emepụta Laptọọpụ & Ndị na-ebubata ihe - Ụlọ ọrụ Laptọọpụ China
OEM & ODM China Waterproof Computer ubu akpa
Waterproof kọmputa ubu akpa, waterproof na inogide, nwere ike ime ahaziri logo, free imewe, nnukwu ikike nwere ike abịa 12-15.6 inch kọmputa, thickened shockproof na mkpakọ mmetụta.
Ihe No.LSB 3001
Nha:12L * 7W * 17H inch
Ihe:600D Oxford akwa akwa
Agba:Grey, ma ọ bụ dị ka ahaziri.
Nkwakọ ngwaahịa:60*50*40cm, 30pcs/CN
Oge Mbuga ozi:ODM: N'ime ụbọchị 7 nwere ike izipu mgbe akwụchara ụgwọ zuru oke
OEM:gburugburu 65-75 ụbọchị.
OEM & ODM China Akpa akpa Laptọọpụ ụmụ akwụkwọ Oxford dị fechaa
Akpa laptọọpụ oxford dị fechaa, mgbochi esemokwu na enweghị mmiri, imewe n'efu maka ndị ahịa maka OEM & ODM abụọ, pcs abụọ zippers ụzọ abụọ na nnukwu ikike maka kọmpụta 12-15.6 inch, ịkwa akwa akwa na ebe ndọka.
Ihe No.LSB 3002
Nha:11L * 4W * 16H inch
Nkwakọ ngwaahịa:1pc n'ime a polybag na 40pcs n'ime a 5-layer katọn.
Oge Mbuga ozi :ODM: N'ime ụbọchị 7 nwere ike izipu mgbe akwụchara ụgwọ zuru oke
OEM & ODM Akpa laptọọpụ ubu okpukpu abụọ
Akpa kọmputa dị fechaa, enweghị mmiri na-adịgide adịgide, mkpọ kọmputa 12-15.6 inch, obere akpa zipa 2 na akpa zipa 1 n'ihu, eriri ubu EPE nwere akwa akwa, na-ewusi ịkwa akwa na akpa azu laptop dum, 1.2KGS kwa ibe.
Ihe No.LSB 3003
Nha:12L * 5.5W * 16H inch
Agba:BK, ma ọ bụ dị ka ahaziri.
Akpa kọmputa OEM & ODM Single Layer Business
Akpa oyi akwa kọmputa nke otu oyi akwa, enweghị mmiri na-adịgide adịgide, mkpọ kọmpụta 12-15.6 nke anụ ọhịa, 1 nnukwu akpa zipa akpa na akpa zipa 1 n'ihu, EPE padded mesh ubu eriri dị mma iburu, ịdị arọ imewe siri ike 0.81KGS kwa ibe.
Ihe No.LSB 3004
Nha:12L * 4.5W * 16H inch
Agba:GY, ma ọ bụ dị ka ahaziri.
OEM & ODM China Business akpa laptọọpụ
Akpa azụ azụ kọmputa, imewe square, enweghị mmiri na-adịgide adịgide, mkpọ kọmpụta 12-15.6 inch, obere akpa zipa ike 2 na akpa zipa 1 n'ihu, eriri ubu EPE nwere ntụ ntụ, dị mma iburu, ịdị nro siri ike 0.7KGS kwa ibe.
Ihe No.LSB 3005
Nha:15.5L * 4.5W * 16H inch
Akpa Laptọọpụ Ubu OEM & ODM China
Akpa laptọọpụ kọmputa, akwa oxford nwere PVC kpuchie, maka kọmputa 12-15.6 inch, akpa nchekwa ikike 2 na akpa zipa 2 n'ihu, nwere oghere USB n'akụkụ, ịkwa akwa akwa na akụkụ ndị na-adọka.
Ihe Nkeji:LSB 3006
OEM & ODM China Multi-space USD na-ananye akpa Laptọọpụ
Multi-space USB chaja g laptop bag, 600D oxford na PVC mkpuchi, eyi na-eguzogide ma na-adịgide adịgide, nwere ike ịkwakọ kọmputa 12-15.6 inch, ibu mbelata imewe, na akwa akwa akwa iji tinyekwuo nchekwa site na zippers, 0.95KG kwa ibe.
Ihe No.LSB 3007
Nha:12L * 6.5W * 16.5H
Agba:Ọchịchịrị Grey, ma ọ bụ dị ka ahaziri.
USB nchaji Laptọọpụ Akpa
Akpa laptọọpụ kọmputa na-ebuja USB nke 600D oxford mere, nke na-eguzogide ọgwụ na nke na-adịgide adịgide, dị fechaa ibu, ọ gaghị eme ka ị nwekwuo ibu.Otu obere akpa uwe mkpọ kọmputa na I-pads, nke ọzọ na-akpa uwe n'akpa uwe, nche anwụ na wdg. ejiri ya kwa ụbọchị, ọmarịcha ma mara mma.
Ihe No.LSB 3008
Nha:12L * 6W * 16.5H
USB nchaji Laptọọpụ mmiri anaghị egbochi mmiri
Akpa laptọọpụ kọmputa na-enweghị mmiri USB, 600D oxford nwere PVC kpuchie, na-eguzogide ọgwụ na nke na-adịgide adịgide, dị fechaa iji aka na akpa buru ibu, nha abụọ dị maka ịtụ, obere akpa nchekwa nchekwa nchekwa atọ, 0.85KG kwa ibe.
Ihe No.LSB 3009
Nha:13L * 6W * 17.5H
Ihe:600D Oxford akwa na PVC mkpuchi
Akpa Laptọọpụ USB na-ebuja
Akpa laptọọpụ kọmputa USB, akwa 600D oxford, enweghị mmiri na-adịgide adịgide, dị fechaa ibu.Otu nnukwu akpa akwa zipa mkpọ kọmputa na I-pads na nke a na-eji kwa ụbọchị, akpa akụkụ nwere ike ịkwanye ketulu mmiri na nche anwụ.0.75KG kwa ibe.
Ihe No.LSB 3010